“आप कहाँ तक जाएंगे?, रक्सौल रक्सौल” बिरगंज बसपार्कमा ओर्लन नपाइ एउटा टाङ्गावालाले सोध्यो । वास्ता गरिन, यतै तिर हो भनेर हात ले ईशारा गरेँ । १३ जुन सोमबार, बिहानको ११ बज्दै थियो, घर बाट यस्तै ८ बजे तिर हिँडिएको थियो । ब्याग भारी भएपनि बोक्न सकिने किसिमको भिर्ने ब्याग (ब्याकप्याक) थियो । त्यो ब्यागभित्र ल्यापटप सहितको अर्को ब्याग पनि अटाएको थियो ।
पहिलो पटक, म रक्सौल छिर्दै थिएँ, अझ भनौँ मेरो लागि पुरै नौलो यात्रा थियो । पहिलो पटक, विरानो ठाउँमा एक्लै जाने हिम्मत पलाएको थियो, तर घरमा भने साथी खोजेर जानु, एक्लै नजानु भनेर धेरै पिर गरिरहनुभएको थियो । एक्लो यात्रा गर्ने भए पनि, मनमा कुनै किसिमको डर रत्तिभर थिएन, आफूलाई भनेको ठाउँमा सकुशल पुग्छु, ठगे त्यही ५०-१०० ठग्लान्, त्यति ठगिएपनि मतलब छैन, सबै सिकिन्छ बिस्तारै भन्ने जस्तो लागिरहेथ्यो ।
नयाँरोडमा आएर बस चढियो, जनकपुर बिरगंजको । मिनिबस साह्रै भिड थियो, म ब्याग बोकेर भित्र छिरेँ, खलासी कराउन थाल्यो । ब्याग यता दिनु डिक्कीमा हाल्नुपर्छ, भित्र खाली छैन, मान्छे उभ्न त त्यस्तो गाह्रो छ । तर म ब्याग आफू सँगै राख्ने मनस्थितिमा थिँए । घरमा ममीले नै भन्नुभएको थियो, ब्याग सँगै राख्न दिएन भने के गर्छौ? मैले हिम्मतका साथ भनेको थिँए, जसरी पनि ब्याग आफूसँगै राख्छु । यसै त ब्याग ठूलो थियो, भारि थियो, डिक्कीमै राख्ने किसिमको । तर ब्यागभित्र ल्यापटप भएकोले ब्यागको औधि जतन गर्नुपर्ने थियो । फेरि बसका डिक्कीहरु औधि फोहोर हुन्छ, धुलो र ग्रिजको कालो लाग्ने सम्भावना ! म खलासी र कन्डक्टरलाई जितेर नै ब्याग भिरेर भित्र छिरेँ । भित्र के सम्हाल्न सकिन्थ्यो र ब्याग, मान्छेलाई खुट्टा अटाउन पनि गाह्रो थियो । त्यही पनि मरे झैँ भएर ब्याग बोकेर पछाडि सारेँ, अनि अरुका सिटमाथि झोला को पिँध टेकाएँ । झोला को फित्ता ले अलिकति छोएछ एउटी बुढी आमैलाई, खै के के भन्न थालीन् मैथलीमा ! मैले ‘सरी’ भन्दै अलि मिलाए झैँ गरेँ ।
म गाडिमा चढेको, झोला आफूसँग राखेको कुरा पहिले देखि नै एउटी केटीले हेरिरहेकी रै’छ । काली-काली हिस्सी परेकी केटी रै’छ, बाग्मती नपुग्दै मुसुक्क हाँसेर झोला दिनु म राख्दिन्छु भनी । गाडी साह्रै भिड भएका कारण उसको सिटसम्म पुग्न पनि मलाई महाभारत थियो, एकछिन पछि दिन्छु है भने । उसले इशाराले टाउको हल्लाइ, मुसुक्क हाँसी र चाउचाउ खान थाली । चपुर पुग्दा सम्म उसका र मेरा आँखा दर्जन पटक जुधिसकेका थिए, उ मुसुक्क हाँसीदिन्थी, म नि मुसुक्क हाँसे । झ्याल छेउको सिटमा बसेकी उसले, कानमा एयफोन जोडेकी थिइ, घरिघरि मलाई हेर्थी, झोला देउ भनेर भन्थी । गाडी अलि खुकुलो भएपछि झोला अझै पछि सारेँ, उसलाई झोला भारी छ भनेँ, हुन्छ केही हुँदैन भनेर उसले झोला लिएर आफ्नो काखमा राखि, उ आफ्नै सुरमा झ्याल बाहिर हेर्दै बसिरही, कतिखेर कतिखेर यसो हेरेर मुसुक्क हाँस्थी । काली काली यतैकी तराइवासी हो भनेर अड्कल काट्न मलाई कुनै गाह्रो थिएन । छोटो ३ घन्टाको यात्रा मा नै साथि भेटिसकेको थिँए, आफैँलाई अचम्म लागिरह्यो ।
पथलैया देखि चैँ उ सँगैको सिटमा गएर बसेँ । जनकपुर घर, बिरगंज घुम्न हिँडेकी भन्थी । उसले कहाँ सम्म भनेर सोधी, मैले नि बिरगंज सम्म हो, अंकल हुनुहुन्छ भनिदिएँ, कारण खासै विश्वास गर्ने अवस्थमा म पुगिसकेको थिइन । रक्सौल भन्दा न पछि पो लाग्ने हो झैँ लागिरहेथ्यो । बिरगंज पुग्नै लाग्दा उसले डेरी मिल्क निकाली र एउटा टुक्रा म तिर तेर्स्याई, मैले टाउको दुखेको झैँ गरि, टाउको दुखेको छ, नखाने भनेँ । घरबाट हिँड्दा जो पायो, नचिनेको ले दे’को खानेकुरा नखानू, लट्टिपट्टि बना’र लैजान्छन् भनेर भनेका कुरा गुञ्जीरहेको थियो । सँगै बसेर आइरहेको भएपनि, उसको हाउभाउको कारण उसलाई विश्वास गर्न सकिरहेको थिइन । तर मनमनै भने सोच्दै थिएँ, यही छोटो यात्रा मा त यस्तो साथी पाइयो भने, पछि पनि पाइएला । तर अब मलाई रक्सौल कसरी पुग्ने, रक्सौल बाट पटना कसरी जाने हो भन्ने कुराले सताइरहेको थियो ।
अघि खासै वास्ता नगरेको टाङ्गावालालाई आफैँले बोलाएँ । रक्सौलसम्म जाने हो भने, कति लाग्छ सोधेँ ? उसले भन्यो २० रुपैँया । मैले सोधेँ एनसी कि आइसी, उसले भन्यो आइसी । टाङ्गा चढेर हिँडेपछि घरमा बुवाले भनेको सम्झेँ, रिक्सामा जानु, टाङ्गामा नजानु, ठग्छन् तिनीहरुले, बुवा केयौँ पटक रक्सौल आउनु भएको थियो पहिले, अहिले पनि पटना सम्म पुर्याउनु जान्छु झैँ गर्नुभएको थियो तर मैले पर्दैन म आफैँ जान सक्छु भनेको थिँए । तर अघि मलाई बसपार्कमा होसै भएन, रिक्सामा जानुपर्छ भन्ने । उसले सोध्यो पट्ना बसपार्क जाने हो ? मैले भने हो हो, पटना बसपार्क तक जाएगें, मुझे पटना जाना हे, दोस्तके सादी के लिए । मैले त्यसलाई सुनाउन फेरि भनेँ, मेरा दोस्त रहेता है पटना मे, त्यति भने’छि अलि हिम्मत बढे झैँ भयो ।
जब जब म बोर्डर नजिक पुगेँ, गाडिहरुको भिड थियो, कस्टममे जाम होता है, उसले भन्न थाल्यो । मेरो ठूलो ब्यागमा के छ भनेर सोध्यो, मैले भने कपडाहरु छन् । उसले टाङ्गाको अगाडिपट्टि झोला राख्दिन्छु भन्यो, नभए झन्झट् गर्छन् बोडरमा । टाङ्गाको अगाडिपट्टि झोला राखियो, घोडा आफ्नो तालमा हिँडिरह्यो । बोडरमा भएको गेटमा निकै भिड थियो, धुलो उडिरहेको थियो । बोडरमा मलाई कसैले केही सोधेनन्, कसैले मेरो झोला चेक गरेनन् । मलाई अचम्म लागिरह्यो !
जब बोडरको गेट (शंकराचार्य गेट) कटेर, सिर्सिया खोलाको पुल तरेर टाङ्गाले भारतीय भुमी टेक्यो, तब मेरो मन कता-कता अमिलो भएर आयो । साँच्चै एक किसिमको अपठ्यारो महशुस भयो, म पहिलोपटक नितान्त नयाँ ठाउँमा छिर्दै थिँए । आफैँलाई प्रश्न गर्न मन लाग्यो, म किन आज हिँडिरहेको छु ? उपलब्धि के हुन्छ ? यस्तै यस्तै । मातृभुमी छोड्दा एक किसिमको अप्ठ्यारो लागिरह्यो । सडक धुलोले भरिएको थियो, ट्रकहरुको घुँइघुइँको आवाज आइरहेथ्यो, अगाडि पछाडी टाँगाहरु थिए, रक्सौल र त्यहाँका मानिसहरु, सडकहरु, पसलहरु एकदमै नौलो लागिरहेथ्यो, टाङ्गा अघि बढिरहेथ्यो, मनमा कता कता विरानो मुलुक हो भन्ने अनुभुतिले मन कटक्क खाइरहेथ्यो । मोबाइलमा सिग्नलहरु क्रमश घट्दै गएका थिए, एकैछिनमा ‘नो नेटवर्क’ भनेर मोबाइल ले देखाउन थाल्यो ।
Cudn't help smiling..:)..[rememberd my experiences of the sme year '011 Raxaul-Patna]
bishal silwal August 1, 2012 at 11:46 AM
aafno ghar birgunj bhayeko le hola, ekdumai romanchak laagyo!
kshiteej chapa August 1, 2012 at 11:51 AM
impressed from your journey expressions : i had started writing about my trekking experiences too...in my blog . @ www.horizonkshiteej.blogspot.com
Nabin K Malakar August 1, 2012 at 11:52 AM
Mani August 1, 2012 at 11:52 AM
I had visited India once frm school inatouradecade ago .... but we had taken very comfortable bus ride till Birgung n equally convenient Train ride till Delhi. Yours seemed tobquite different journey withadifferent purpose ...anyway it was very interesting to read...keep writing.
Rujann August 1, 2012 at 11:52 AM
Why you make it To be continue....we don't have strong enough memory power to visit your site again,,,So make it complete...
Rajanbhtt August 1, 2012 at 11:52 AM
milan good man you is verry confedent parsan ,right now you r patan and ktm?
Santosh KC August 1, 2012 at 11:54 AM
Best of luck for your journery abroad.........
Aakar Anil September 1, 2012 at 1:48 AM
I'm reading it again...and remembering that day. ;)